Wufuud kala duwan oo ku sii wajahan Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Wufuud kala duwan oo ku sii wajahan Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay
Wufuud kala duwan oo ku sii wajahan Dhuusamareeb iyo Wararkii ugu dambeeyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxaa kusii qul qulaya wufuud kala duwan, kuwaas oo halkaasi uga qeyb geli doona Shirka Madaxda DF Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada dalka.
Sabtidii shalay waxaa Dhuusamareeb gaaray Madaxweynaha JFS, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxana jira wufuud kale oo Axadda maanta ah tegaya halkaasi.
Xubnaha ka maqan Dhuusamareeb ee laga sugayo ayaa waxaa kamid ah Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku maqan dalka Jabuuti kaas oo la filayo in uu Maanta kasoo laabto iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ku sugan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirka Magaalada Dhuusamareeb oo ah wajiga 3-aad ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo ay kamid yihiin Amniga, Dhaqaalaha, waxaana ugu muhiimsan in arrimaha doorashooyinka oo qorsuhu yahay in Shirka laga soo saaro nooc doorasho oo la isku raacsan yahay.
Waxaa aad loo adkeeyay ammaanka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug, waxaana halkaasi ku sugan ciidamo kala duwan oo ka tirsan kuwa DF Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Itooiya.
Shirka Dhuusamareeb 3
Wufuud ku wajahan Dhuusamareeb